Nhungamiro Yakareruka Yekugadzira Mari paEbay - TMC App
Nhungamiro Yakareruka Yekugadzira Mari paEbay
Imwe nzira yekuita mari paBay iyo yakawanda yevatengesi isingatarisire ndeyekuita mari pakudzoka. Zvigadzirwa zvinodzokera kune anenge mutengesi wese pakupedzisira sezvo zvakaoma kugutsa vatengi vese nguva dzese. Nekushandura madzoro ako kuita muhoro iwe unogona kugadzira mari paBay pasina kungopa zvinhu zvako.
Zvadaro zvakakosha kuti usadzorere mari yekutumira, kana uchizoita mari paBay kubva pane zvaunodzoka. Iwe unogona kunge uchiwana mari paBay kubva kumari yako yekutumira zvakadaro kana uri kushandisa zvinhu zvakachipa uye uine mutengo wekutumira wezvinhu, zvisinei nehuremu hwazvo. Kana iwe ukangodzosera muripo wezvinhu zvakadzoserwa asi kwete yekutumira ipapo iwe uchaunza mari paBay nekuda kwekuti iwe unozokwanisa kubhadharisa iyo yakafanana mari yekutumira kune mumwe mutengi ano bhidha pane chinhu chadzoserwa kana iwe. relist it. Sezvo iwe wakatowana purofiti kubva kumari yekutumira kekutanga, iwe uri kuenda kaviri iyo purofiti kechipiri iwe yaunounza chinhu uye unokwanisa kuita mari paBay kubva kune yako inodzosa iyo kubva kune yako yekutanga rondedzero.
Kuti ikubatsire kuita mari yakawanda pazvinhu zvako zvadzoka unogona kubhadharisa mutengo wekudzoreredza. Ichi hachisi chinhu chinonyanya kufarirwa nevatengi uye chinogona kukonzera mhinduro isina kunaka asi iwe uri mukati mekodzero dzako kubhadharisa muripo wekudzorera uye inzira yakavimbiswa yekuita mari paBay kubva pane zvaunodzoka. Zvingave zvine mufungo kungochaja muripo wekudzoreredza pazvinhu zvakakurisa kana zvinodhura kuderedza mukana wekugamuchira mhinduro yakaipa izvo zvinozova nemhedzisiro isingafadzi pamikana yako yekuita mari kubva kuBay nekuderedza kutengesa kwako.
Kana iwe uine chinhu chakadzoserwa saka nzira yakanakisa yekuita mari paBay ndeye, zviri pachena, kuiona mune imwe auction. Zvakadaro, zvakakosha kuyeuka chikonzero chekudzokera kumashure kunovimbisa kuti hazviitike kechipiri uye zvinoita kuti zviome kwauri kuita mari paBay kubva pakupa chinhu icho chinoramba chichidzoserwa. Kana chinhu chakadzoserwa nekuda kwekuti zvanga zvisiri izvo zvaitarisirwa nemutengi saka unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unonyora tsananguro yako zvakajeka kechipiri kuti uwedzere mikana yako yekuve nemutengi anogutsikana uye kukwanisa kuunza mari paBay. izvo zvawanga uchida kuita munzvimbo yekutanga.